အိမ်လုပ် ချည်သားမျက်နှာဖုံးပြိုင်ပွဲ ပထမဆုရရှိသူများနှင့်အတူ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ ဗီဒီယိုရှင်းလင်းပွဲ ကျင်းပ ~ Myanmar Online News
အိမ်လုပ် ချည်သားမျက်နှာဖုံးပြိုင်ပွဲ ပထမဆုရရှိသူများနှင့်အတူ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ ဗီဒီယိုရှင်းလင်းပွဲ ကျင်းပ
ပြည်သူ့ဆုပေးပွဲ ဒေါ်ဖြူဖြူငြိမ်း (ရှင်ငြိမ်း) မှ ပထမဆုရရှိခဲ့သော ဒေါက်တာကျော်ကျော်ဝင်း (a) eric yang နှင့် စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံး အကြံအစည်ဆုရရှိခဲ့သော ဒေါ်ဖြူဖြူငြိမ်း)နှင့် ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည် ။
ဂျပန်နိုင်ငံမှ ဦးမျိုးစံဦး (a) myo gyi နှင့် ပြည်သူ့စိတ်ဝင်စားမှုဆုကို အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးသော ဒေါ်ကြည်ကြည်ဝင်း.ပြည်နယ်ကောင်စီမှ နှုတ်ခွန်းဆက်စကားများအပြီးတွင် ဒေါက်တာ ကျော်ကျော်ဝင်းက ' ပုံမှန်အသစ် ' လူမှုရေး ၊ စီးပွားရေးနှင့်ပညာရေးကဏ္ဍများတွင် covid-19 နှင့် အတူနေထိုင်နည်း လူမှုဆက်ဆံရေးနဲ့ ယှဉ်တွဲပြီး သက်သာတဲ့ အားထုတ်မှုတွေနဲ့အတူ လိုအပ်နေပါတယ် ။
ကမေယုမြို့နယ်တွင် နေထိုင်သော ပိုလန်ခေါင်းရုံးမှ ဒါရိုက်တာ ဒေါ်ဖြူဖြူဖြူငြိမ်း ၊ ကမေယုမြို့ ၌ နေထိုင်သော အဖွဲ့အစည်းကို စောင့်ရှောက်ရန် စီစဉ်ထားသည်ကို ရှင်းပြခဲ့သည် ။ သူမ ၏ ခံစားချက်များနှင့် မိခင်တစ်ဦးအဖြစ် ကိုယ်ဝန်ဆောင် အမျိုးသမီးများကို ကူညီထောက်ပံ့ပေးနေသည် "metta"; orphans ကို ဂရုစိုက်ခြင်းမှာ အခက်အခဲများ ။ covid-19. အကြောင်း ကလေးတွေအတွက် အသိပညာ ပရိုဂရမ်မာတွေ ပေးနေပါတယ် ။
ဂျပန်နိုင်ငံ tetsu 20 ကုမ္ပဏီမန်နေဂျာ ဦးမျိုးစံဦး (a) မျိုးစံဦး ၊ အိမ်လုပ် ချည်သားမျက်နှာဖုံး ပြိုင်ပွဲတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်း ၊ ဂျပန်နိုင်ငံမှ မြန်မာပြိုင်ပွဲဝင်များ ၏ ပါဝင်ဆင်နွှဲခြင်း ။ ဂျပန်နိုင်ငံ ၏ အိမ်လုပ် ချည်သားမျက်နှာဖုံးများ အသုံးပြုခြင်း ; ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အလုပ်အကိုင်အခြေအနေ covid-19 pandemic. ဝိုင်းဝန်းရံမြို့နယ်မှ ဒေါ်ကြည်ကြည်ဝင်းက ပြိုင်ပွဲဝင်ရန် အဓိကအကြောင်းရင်းများကို ရှင်းပြခဲ့သည် ။ သူမ ၏ အိမ်လုပ် ချည်သားမျက်နှာဖုံးများ ၊ မျက်နှာဖုံးဒီဇိုင်းနှင့် အကြမ်းစားပစ္စည်းများ ပြုလုပ်ရာတွင် အသုံးပြုသော ပစ္စည်းများ သူမ ၏ တုံ့ပြန်ချက်မှာ covid-19 နှင့် ဆက်စပ်မှုအရှိဆုံးပြဿနာသည် နေ့စဉ်ဘဝတွင် လက်တွေ့မကျသော လူနေမှုပုံစံဖြင့် လူမှုဆက်ဆံရေးသည် ။ ဆရာဝန်တစ်ဦးသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်သည်သာမက စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို ဆက်ဆံရမည် ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေကိုနားလည်ပါ ။. မြဝတီနယ်စပ်မြို့ထဲကနေတဆင့် ပြန်လာတဲ့ မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား ထောင်ပေါင်းများစွာသော မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေကို ဒီလမ်းကြောင်းကနေ ပြန်လာဖို့ မျှော်လင့်ထားပါတယ် ။ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်မှုမှတစ်ဆင့် သူတို့ ၏ လေးစားရသော ပြည်နယ်များနှင့် ဒေသများသို့ သယ်ယူပို့ဆောင်ပေးရမည် ။ ၎ င်းတို့အားလုံးအပေါ် ဆေးစစ်ရန် ခက်ခဲသော်လည်း ၎ င်းတို့ ၏ ဒေသများတွင် quarantine facilities တွင် ကျင်းပခဲ့သည် ။ တိုင်းပြည်အတွက် ကြီးမားသော စိန်ခေါ်မှု တစ်ခု ရှိလိမ့်မည် ။ လာမည့် လ သို့မဟုတ် သုံးလ ၊ ဆေးစစ်ချက်များကို သယ်ဆောင်သွားရမည် ။ ရောဂါကိုထိန်းချုပ်ပြီး အကောင်းဘက်သို့ ကုသမှုများ ပေးရမည် ။ ထိုအရာသည် monsoon အစုံလိုက်သည်နှင့် ပြန်လာရန် ခက်ခဲလိမ့်မည် ။
ပြည်နယ်ကောင်စီက ဒီပြိုင်ပွဲမှာ ဆုတစ်ခုပဲပေးဖို့ စီစဉ်ထားပြီး ပါဝင်သူ 20,000 ကျော်က ဆုရသင့်တယ် ။ ဒါပေမဲ့ arrangements တွေကို souvenir ကဒ်တွေပို့ပေးဖို့ စီစဉ်ထားတယ် ။ ဆုအမျိုးအစားတွေ ဒီပြိုင်ပွဲမှာ အများပြည်သူဆု ၊ စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံး စိတ်ကူးဆု ၊ အကောင်းဆုံးဖန်တီးမှုဆုနဲ့ လူထုစိတ်ဝင်စားမှုဆုကို အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးခဲ့ပါတယ် ။
လူ့အသိုင်းအဝိုင်းက "single mother" အယူအဆကို လက်မခံတဲ့ အကြောင်းရင်းက တန်ဖိုးရှိတဲ့ အသိုင်း အဝိုင်းက သူ့ကလေးဘဝတုန်းက ဒီပြသနာကို အားပေးခဲ့တယ် ။ ခွဲခြားဆက်ဆံဖို့ မသင်ပေးခဲ့ဖူးဘူး ။ မခံစားသင့်ဘူး ။ သိမ်ငယ်ပြီး အသိုင်းအဝိုင်းက သူတို့ကို အောက်မကျစေဘူးလို့ မျှော်လင့်ထားတယ် ။ တကယ့်ပြဿနာက ပြဿနာမဟုတ်ဘူး ၊ ပြဿနာက အဖြေရှာလို့မရပါဘူး ။
မြန်မာလူမျိုးအများစုက မျက်နှာဖုံးတွေကို မသုံးတတ်ကြဘူးလို့. အဲ့ဒါကြောင့် လူတွေဟာ ကိုယ့်မျက်နှာဖုံးတွေ လုပ်ဖို့ အားပေးနေကြတာ. ရောဂါဘယ်လောက်ကြာနေမှန်း မသိသေးလို့. ဒီမျက်နှာဖုံးတွေ ပြန်သုံးလို့ရသလို. ဒီမျက်နှာဖုံးသုံးခု သို့မဟုတ် လေးခုရှိခြင်းက ရည်ရွယ်ချက်ကိုထမ်းဆောင်မှာပါ ။ မျက်နှာဖုံးတွေကို စနစ်တကျဝတ်ဆင်သင့်ပါတယ် ။ လူနာတွေကို ကိုယ်ချင်းစာတရားနဲ့ ကုသပေးသင့်ပါတယ် ။ စည်းကမ်းကို metta (ချစ်ခင်ကြင်နာမှု) နဲ့ ထိန်းသိမ်းထားသင့်ပါတယ် ။ ရွာနဲ့ ward အဆင့်တွေမှာ covid-19 ကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့ တိုင်းတာမှုတွေကို လူတိုင်းရဲ့ ပါဝင်ဆင်နွှဲမှုနဲ့အတူ သယ်ဆောင်သွားမယ်လို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ် ။
သူမ ၏ အမှတ်အသားများထဲတွင် လူထုပါဝင်မှုသည် ဘယ်အလုပ်မဆို အောင်မြင်မှုအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ကြောင်း ပြည်နယ်ကောင်စီက ပြောသည် ။ ထိုလူတွေမှာ အလွန်အကျွံ စိတ်ဝိဉာဉ်ရှိရမည် ။ covid-19 သည် အားလုံးအတွက် ကြီးမားသည့် စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည် ။ သူမ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကို ဒီစိန်ခေါ်မှုရလဒ်အဖြစ် စည်းလုံးညီညွတ်စေချင်ပါတယ် ။ အနာဂတ်အစီအစဉ်တွေကို မှန်ကန်ကန် ဖော်ဆောင်ထားသင့်ပါတယ် ။ လက်ရှိအခြေအနေက မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ဖိအားပေးနေသူတွေအတွက် ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာ ပိုမိုသိရှိနားလည်အောင် ပြခွင့်ရခဲ့ပါတယ် ။ မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းဟာ covid-19 ကို မျက်နှာဖုံးပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ကူညီနိုင်ခဲ့ပါတယ် ။ ဒါကြောင့်လူတစ်ယောက်ချင်းစီက အရေးကြီးပါတယ် ။ သူမဟာ ဒီအွန်လိုင်းအစည်းအဝေးမှာ အရမ်းပျော်ရွှင်ပြီး အားပေးခဲ့ပါတယ် ။ လူတိုင်းကို ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ် ။ "metta" ကို တစ်ယောက် နားလည်အောင် ဘယ်လို ယဉ်ကျေးအောင် သင်ပေးဖို့ အစောပိုင်းအရွယ်မှာ ကလေးတွေကို သင်ကြားပေးဖို့ လိုအပ်နေပါတယ် ။ နောက်ဆုံးတော့ covid-19. ကိုကျော်လွှားနိုင်ဖို့ ဒီပရိုဂရမ်မှာ ပါဝင်ဆင်နွှဲစေချင်တယ်လို့ သူမက ပြောပါတယ် ။